विदेशमा मृत्यु भएका साढे पाँच हजार कामदारका परिवार र सात सय २९ जना अंगभंग भएका पीडितले क्षतिपूर्ति लिए
Sat, May 26, 2018 | 12:02:28 NST
16:40 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, वैशाख ८ – झण्डै ९ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट विदेशमा ज्यान गुमाएका पाँच हजार चार सय ९० जनाका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका छन् ।
यो अवधिमा विदेशमा ज्यान गुमाएका एक सय १६ जना महिला कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका थिए । बोर्डले आर्थिक सहायता दिन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तीन जना महिला सहित ७८ जना मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चार सय १९ जना मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति लिए । त्यस वर्ष विदेशमा ज्यान गुमाएका १९ जना महिला कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएको बोर्डले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाँच सय ५८ जना विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लिएका छन् । क्षतिपूर्ति लिनेमा विदेशमा मृत्यु भएका ८ जना महिला कामदारका परिवार छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १८ जना महिला सहित छ सय ४७ मृतक कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका थिए । आव २०६९/७० मा ११ जना महिला सहित सात सय २२ र आव २०७०/७१ मा २४ जना महिला कामदार सहित आठ सय ७६ जना मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका थिए ।
क्षतिपूर्ति लिनेको संख्या वर्षेनी बढेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोडर्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ जना महिला कामदार सहित एक हजार ६ जना मृतक परिवारले क्षतिपूर्ति लिँदा आव २०७२/७३ मा २४ जना महिला सहित आठ सय १५ जना मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सकिन झण्डै दुई महिना बाँकी रहँदा तीन सय ६१ जनाले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लिएका छन् । तीमध्ये विदेशमा मृत्यु भएका सात जना महिला कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति लिएका हुन् ।
विदेशमा अंगभंग भएर फर्केका कतिले क्षतिपूर्ति लिए ?
कार्यस्थलमा हुने र्दुघटना, सडक र्दुघटनाका साथै अन्य र्दुघटनामा परेर अंगभंग भएका सात सय २९ जनाले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि अहिलेसम्मको अवधिमा उनीहरुले क्षतिपूर्ति लिएका हुन् । तीमध्ये विदेशमा अंगभंग भएर फर्केका २५ जना महिला कामदार छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आठ जना र आव २०६६/६७ मा १० जना अंगभंग भएका पीडितले क्षतिपूर्ति लिए ।
त्यस्तै, आव २०६७/२०६८ मा ३१ जना, आव २०६८/६९ मा दुई जना महिलासहित ५७ जना र आव २०६९/७० मा तीन महिला सहित ९० जना विदेशमा अंगभंग भएर फर्केकाले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लिएका हुन् ।
आव २०७०/७१ मा आठ जना महिला सहित एक सय १६ जना, आव २०७१/७२ मा चार जना महिला सहित एक सय ८३ जना र आव २०७२/७३ मा पाँच जना महिला सहित एक सय १६ जनाले क्षतिपूर्ति लिएको बोर्डले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को चैत मसान्तसम्म एक जना महिला कामदार सहित विदेशमा कार्यरत छँदा अंगभंग भएका एक सय १८ ले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लिएका छन् ।
आर्थिक सहायता कसरी लिने ?
मृतक कामदारका परिवारले तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन् । सहायता पाउन वैदेशिक रोजगार विभागवाट श्रम स्वीकृति लिई गएको, करार अवधिभित्र मृत्यु भएको, मृत्यु भएको प्रमाणित भएको एक वर्षभित्र मृतक कामदारको हकवालाले वोर्डको सचिवालयमा निवेदन पेश गरेको हुनुपर्छ ।
निवेदनका साथ मृतक कामदारको पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति पत्र, करारपत्र, रोजगारदाता मुलुकको निकायबाट प्रमाणित हुने किसिमको मृत्यु प्रमाणपत्र, दूतावासको सिफारिस पत्र, मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्र, हकवालासँग मृतकको नाता प्रमाणित पत्र, मृतक कामदारको नागरिकता, हकवालाको नागरिकता, हकवालाको पासपोर्ट साइजको दुई प्रति फोटो र मृतक अविवाहित भए त्यसको प्रमाणित कागजात संलग्न गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा छँदा दुर्घटनामा परी अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका कामदारलाई वोर्डले अंगभंगको प्रकृति अनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागवाट श्रम स्वीकृति लिई गएको, करार अवधि भित्र अंगभंग भएको, अंगभंग भई स्वदेश फर्किएको एक वर्ष भित्र वोर्डमा निवेदन दिनु पर्छ ।
अंगभंग भएका पीडितले पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति पत्र, करारपत्र, रोजगारदाता मुलुकमा उपचार गराएको कागज पत्र, सम्बन्धित दूतावासको सिफारिस पत्र, कामदारको नागरिकता, अंगभंग भएको कामदारको अंगभंग भएको फोटो, नेपाल फर्किए पछि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको कागज पत्र र नेपाल फर्कंदाको हवाई टिकटका निवदेन दिए क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।
कास्की, जेठ १२ – पोखराको फूलबारीमा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार सेवा ठप्प भएको छ ।
पाल्पा, जेठ १२ – बाल्टीको पानीमा डुबेर रामपुर नगरपालिका–खोप्टार बस्ने तीन वर्षीय सविन थापाको शनिबार बिहान ७ बजे ज्यान गएको छ ।
मोरङ, जेठ १२ – चर्चित सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणि उपे्रतीको मोरङ जिल्ला अदालतमा गरिएको बयान लम्बिएको छ ।